लालीगुरॉस सहकारीको चंगुलमा म यसरी फसे ! -रामकृष्ण ढकाल - Dharahara Online
फेशन / सौन्दर्य
लालीगुरॉस सहकारीको चंगुलमा म यसरी फसे ! -रामकृष्ण ढकाल
by Dharahara Online
म सानैदेखि गायनमा संक्रिय रहेर सबैको माया पाएर रमाएको जनताकै कलाकार हु । जनमनकै मायामा म टिकेको छु । २०४२ सालदेखि आजसम्म जनताकै मायाले अधि बढ्दै आएको छु। यात्रा अहिले पनि जारी छ । जे जति कमाए जहॉ पुगे सबै जनमनकै कारणले हो । मेरो प्रतिभा र क्षमता जेजति देखाउन सके सबै जस जनतालाई नै जान्छ । बहुत दुख कष्ट झेलेर नाम कमाएको छु ।
प्राय सबै गीतकार , संगीतकारज्युहरुको माया सदभाब पाएकाले सबैसंग काम गर्ने अबसर पाए । कामकै शिलशिलामा धेरैजानासंग नजिक पनि भए । गहिरो मित्रता कायम रहदै गयो । यसरी नै प्राय सबैको माया सदभाब र आर्शिवाद पाएकाले संसारमा मेरो त कोहि दुश्मन छैन भन्ने ठान्दै गए । हुन पनि बाल्यकालदेखि लक्का जवान हुदॉसम्म पनि कहिल्यै कसैसंग सम्बन्ध बिग्रेन । यहि कारणले सबैलाई जहिल्यै पनि मित्र नै देख्ने स्वभाब ममा रहदै आयो । यहि स्वभाबले कहिले काहि मानिसलाई नराम्ररी धोका पनि दिदो रहेछ । अहिले म त्यसैको शिकार भएको छु ।
सुनेको थिए सारो गाह्रो पर्दा बैंक र सहकारी संस्थाहरु साथीजस्ता भएर आउछन् । तर मेरो अनुभब यो सबालमा तितो रहयो । २०६५ सालसम्मको अवधि मेरो करियरकै सबैभन्दा उत्तम रहेकाले ऋण कसैसंग लिन परेन ।आरामकै जिन्दगी थियो । अशल साथीहरु र शुभचिन्तकहरु पाएकाले खुशी नै थिए । सानो परिवार र सुखी परिवारमा रमाएकै थिए । त्यस्तैमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुदा सुरेन्द्र भण्डारीसंग चिनजान भयो । संगीतप्रेमी हु तपाईको ठुलै फ्यान बताएपछि म पनि फुरुंग । तुरुन्त गज्जब निकट दोस्ती भयो हाम्रो । त्यसपछि हाम्रो भेटघाट जावतआवत बढ्दै भयो । मेरो सबै कुरा र अवस्था बुझे उनले । मैले पनि असल साथी नै हुन भनेर कतिपय कुरा खोल्दै गए।
संगीतमा लागेर कमाएर जोडेको घर अलि पुरानै भएको थियो । मेरो घर देखेर सुरेन्द्रजीले मलाई बिस्तारै उचाल्न थाले । ” तपाई जस्तो देशकै उत्कृष्ठ गायकले पनि कहॉ सधै एउटै घरमा बसिरहेको यसरी हुदैन घर फेर्नु पर्छ । सुबिधा सम्पन्न घर लिनु पर्छ ।” उनले बारम्बार यसरी नै नयॉ घर लिन प्रेरित गरिनै रहे । मेरो सोच त्यतिखेर पनि नयॉ घर किनीहाल्ने भन्ने थिएन । उनले बारम्बार कर गरिरहन्थे । “ घर खोज्ने मिलाउने सबै काम मेरो “ भन्थे । करिब १ वर्ष नै उनले मलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहे । पटक पटक भने पछि मेरो कमलो मन पनि बिस्तारै परिवर्तन भयो । उनको कुरा ध्यान पुर्वक सुन्न थाले ।आफ्नो अवस्था पनि बताए । घर लिनोस सारो गाह्रो अवस्थामा म हेरुला भने । अन्तत:२०६६ सालमा पत्नी निलमको नाममा घर लिने निर्णय गरे । सुरेन्द्र भण्डारीले राम्रो सहयोग गर्ने वचन दिए । म उनी प्रति आभारी भए ।
गला सुकाएर देश बिदेशमा जुत्ताको तलुवा फटाएर जोहो गरेको केहि पैसा मसंग थियो । नपुग पैसा सुरेन्द्रले आफ्नै सहकारीबाट ऋण मिलाईदिने भए । व्याज पनि कम लिने बचन दिए । साथी भनेर उनकै भरोषामा परे । यो भन्दा अधि कहिल्यै ऋण नलिएकाले यस सम्बन्धी त्यति बुझेको थिईन । साथीको नाताले सुरेन्द्रले सबै मिलाउछ भनेर ढुक्क भए । सुरेन्द्रले मलाई घर पनि देखायो चित्त बुझ्यो घर पनि । किन्न राज़ी भए । घर किन्न सुरेन्द्रले आफ्नै सहकारीमार्फत ऋण दिन तयार भए । म सिधा मान्छे सुरेन्द्रलाई भगबान नै ठाने । मनमनै सोचे “ कति असल मान्छे पैसा पनि आफै दिने घर पनि आफै खोजीदिने यस्तो मान्छे पनि संसारमा रहेछ।”
अन्तत: २०६६ साल फागुन ५ गते पाल्चोक स्थित लालीगुरासं सहकारी संस्थाले मेरी पत्नी निलमको नाममा ऋण स्विकृत गर्यो । यसवापत मैले सैवु स्थित आफ्नो जग्गा र त्यसमा बनेको घर धितो राखे ।आफ्नो मेहनतले कमाएर बनाएको घर यसरी धितो राख्दा मन अलि चस्स भएको थियो । चस्केको मनलाई राम्रै कामको लागि हो भनेर बुझाए । जिवनमा कहिल्यै नबोकेको ऋणको भारी यसरी बोके । ठिकै छ कमाई पनि छ । साथीले पनि सहयोग गर्छु भनेकै छ तिरिन्छ भनेर म ढुक्क थिए । विश्वासको कारणले कागजात पनि त्यति हेरिन । हेर्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने मात्र हेरे । सहि गरे । लफडा होला फसिन्छ भन्ने कहिल्यै सोचिन ।
नयॉ घर पाएकाले दंग थिए । नयॉ साजसज्जा गर्छु भनेर सोचे । समय अनुसारको डेकोरेशन र डिजाईन गर्न लगाए ७५ लाख जति खर्च भयो । छोरी रानी र पत्नी निलम पनि नयॉ घर पाएर दंग थिए । आखिर सुख भनेकै परिवार सुख त हो नि भनेर म पनि दंग नै थिए । समय सधै एकनास नरहदो रहेछ । मलाई पनि समयले त्यति राम्रो साथ दिन छाड्यो । संगीत बाहेक आय आर्जनको अर्कों स्रोत थिएन । संगीतको बजार डिजिटलतर्फ लागेपछि तत्काल आय आर्जन भएन । कार्यक्रमहरु पनि राजनितिक कारणले गर्दा कम हुदै गएका थिए । यस्तो परिस्थितीमा मेरो पनि कमाई कम हुदै गयो । जसोतसो केहि ऋणको किस्ता चाहि तिर्न सकेको थिए । संगीतको बजार र अवस्था झन झन् बिग्रीदै गए पछि ऋणले गाह्रो पार्दै लग्यो । नियमित किस्ता तिर्न सकिएन । यता सहकारीले बारम्बार फोन गरेर ताकेता गर्न थाल्यो । यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्छु भन्ने सुरेन्द्र पनि मेरो कुरा सुने पनि नसुने झै गर्न थाले ।
समग्र संगीत उद्योग धराशायी हुदा त्यसको असर मलाई पनि पर्यो । यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर ऋण दिने साथी सुरेन्द्रले उल्टै मलाई अर्थ न वर्थका कार्यक्रममा गाउन लगाएर उल्टै श्रम शोषण गरे । साथीको लागि भनेर बिना पारिश्रमिक धरै कार्यक्रममा गीत गाईदिए । एकदिन तनाबमा कहि कतै नगई घरमै बसिरहेको थिए । सुरेन्द्र भण्डारीको फोन आयो । उठाए । ऋणको बारेमा नै कुरा भयो । सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएर अफिसमा बोलाए । कुरो मिलाउन भनेर गए । तर उनको सोच अर्कै रहेछ । म पुग्दा त उनीहरुले पुरै ऋणको हिसाब बोकेर बसिरहेको रहेछन् । सुरेन्द्रले तत्काल तिर्नु पर्ने व्याजलाई ऋणमा परिणत गर्ने प्रस्ताब राखे यसो गरे मात्र घर लिलामीबाट जोगाउन सकिने उनले बताए । ऋण लिएको दुई वर्ष पनि भएको छैन घरै लिलामी भन्ने कुरो कानमा परेपछि मेरो सातो गयो ।
कता कता सुरेन्द्रको भुमिका शंकास्पद लाग्न थाल्यो । अन्तत: मैले बरु घरै छोडिदिन्छु मलाई ऋण मुक्त गरिदेउ भने । तर उनीहरुले मानेनन मलाई तिर्नु पर्ने व्याजलाई ऋणमा परिणत गराउने कागज जोरजुलुम गरेर गराए । म पनि टेन्सनमुक्त हुन्छु कि भन्ने आशले उनीहरुको प्रस्ताब स्विकार्न बाध्य भए । मेरो नाममा पनि ५७ लाखको नयॉ ऋण बोकाउन लालीगुरास सहकारी सफल भयो । जिवनमा पहिलो चोटी कसैबाट ठुलो धोका खाएको अनुभूति भयो । सुरेन्द्रले साथी बनेर आफुलाई फसाएको चाल पाए । तर मसंग कुनै उपाए थिएन । नलिनु पर्ने ऋण लिएर म फँसी सकेको थिए । सुखी संसारबाट दुखी संसारमा आएको नमिठो अनुभब गरे ।
यो घटना लगत्तै म युरोप टुरमा निस्के । गाएरै कमाएर तिर्छु भन्ने सोच मनमा थियो । भरपुर मेहनत गरि रहेको थिए । तर एक्कासी २०७१ साल जेठ २६ गते सहकारीले हामी दम्पतीको फोटो सहित घर लिलामीको सुचना निकाल्यो । जवकि सुरेन्द्रले मलाई ५७ लाखको ऋण बोकाउने बेलामा घर लिलामीमा जान दिन्न भनेको थियो । साथीले बोलेको बचन पुरा गरेन । म त्यतिखेर बेल्जियममा थिए । यताबाट निलमले रुदै फोन गरिन । म पनि रोए । पिडा भुल्न चियो बियर पिए । म यहॉ नभएको बेला सहकारीले २०७१ साल साउन २३ गते मेरो घर लिलाम गर्यो । लिलामीमा किन्न कोहि नआएको भन्दै मेरो घरको मोल आफै तोक्दै लिलामी गरेको थियो । ऋण दिनेवेलामा २ करोड ५० लाखको मुल्यांकन गरेको घर लिलामी गर्ने बेलामा १ करोड ५० लाख मात्रै मुल्य तोकियो ।
मेरो घर लिलामीमा गएको खबर सारा देशभरि फैलियो। मलाई धेरैले फोन गर्नु भयो । प्रधानमंत्रीदेखि धेरै नेताहरु , व्यापारी कर्मचारी सबैले मप्रति सहानुभूति देखाउनु भयो । के सहयोग गर्नु पर्छ भनेर सोध्नु भयो । तर मैले कसैसंग केहि मागिन । केहि नेताहरुले सहकारीमा फोन गरेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नु पनि भएछ । तर यो मैले लगाएको थिईन ।स्वतस्फुर्त आफै भन्नु भएको थियो । यसैलाई सहकारीका प्रमुख सुरेन्द्रले मैले दबाब दिन लगाएको भनेर प्रचार गरे । नहुनु पर्ने मेरो भैसकेको थियो अब कसैलाई मिलाई दे भन्नुको कुनै तुक थिएन । त्यसैले म चुप थिए ।
१ करोड ८० लाख ऋण लिएर २ करोड ५० लाख मुल्याकंन भएको घर जग्गा सबै सहकारीलाई छोडिदिएको थिए । अझ त्यो घर मर्मत र डेकोरेशन गर्न गरेको खर्च जोड्दा ३ करोड ५० लाख पुग्छ । यतिका रकम माया पारे । तैपनि मलाई सहकारीले ऋण मुक्त ठानेन । ऋण चुक्ताको प्रमाणपत्र दिएन । घर लिलामी पछाडी पनि सहकारीले पछयाउन नछोडेपछि म बाध्य भएर जिल्ला अदालत पाटनमा मुद्दा हाले । अदालतको फैसला मेरो पक्षमा आयो । मैले मुद्दा हाल्दा सहकारीले कुनै रकमको माग दावी नै गर्न सकेन । त्यसैले अदालतले ऋणको हरहिसाब लगाउनु पर्ने नदेखिएको फैसला सुनाईदियो। यसको मतलब म ऋणमुक्त छु । यो लफडा यसरी सकिएको थियो ।
अहिले फेरि एकाएक त्यो सहकारीले मेरो ऋण बाकी भएको सुचना जारी गर्यो । म आश्चर्यमा परेको छु । मेरो बदनाम गर्न खाँटा बसेको घाउ फेरि कोट्याउने प्रयत्न हो यो। यसलाई मैले गम्भिर रुपमा लिएको छु । तत्कालीन कानुन अनुसार यदि धितो लिलामी गर्दा ऋणको परिपुर्ती भएन भने कुनै पनि सहकारीले ऋणदाताको अन्य सम्पतिबाट पनि असुल उपर गर्न सक्छ तर त्यसको झिनोफानो एक वर्ष भित्रै गरिसक्नु पर्छ । तर एक वर्षसम्म सहकारीले कतै मुद्दा दायर गरेन । जिल्ला अदालतको फैसला पछि चार वर्ष मौन रहेको सहकारीले एकाएक अहिले आएर पत्रिकामा सुचना निकाल्नुको कारंण के हो ? यदि मैले त्यत्रो ५ करोड तिर्न बाकी थियो त आजसम्म के हेरेर बसेको ?
त्यसमाथी म अहिले बस्ने घर र सहकारीका मालिक सुरेन्द्र बस्ने घर ५ मिनेटको दुरीमा छ । आएर भन्न सकिन्थ्यो । म कालाकार मान्छे लुकेर लुक्न सकिन्न । सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेकै हुन्छु । त्यहि आएर पनि समाउन सकिन्थ्यो । म पुर्ण रुपमा ऋणबाट मुक्त छु । तिर्न जाने सवाल नै छैन । यो सुचना मेरो बदनाम गर्ने तरिकाले संप्रेषण भएको देखिन्छ । पछिल्लो दिनमा लालीगुरॉस सहकारीको बजारमा राम्रो चर्चा छैन । पिडित ऋणीहरु संगठित बनेको सुन्दैछु । यसैबाट अतालिएर कराएका होलान । पिडितहरु संगठित हुनु उनीहरुको अधिकार हो । तर यसमा मेरो कुनै योगदान हात छैन । उनीहरु आफै संगठित भएर आएका हुनुपर्छ । पाप एक दिन धुरीबाट कराउछ भन्ने सुनेको थिए सायद त्यसैको संकेत पो हो कि ! म पनि त्यो सहकारी बिरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गर्ने सोचमा पुगेको छु ।
( कुराकानीमा आधारित)
तीजको उपलक्ष्यमा ज्येष्ठ आमाहरु र कलाकार सम्मानित
उत्साहित सौन्दर्यकर्मी गौरी
मलाई गीतले नै चिरकालसम्म बचाउछ- रत्न शम्शेर थापा
कलाकारितामा कोरोना भाइरसको प्रभाव: कलाकार र प्राविधिक...
यादव खरेल : भ्रमित हुन् या झुट बोलिरहेछन् ? तथ्य यस्तो...
सृष्टिकी सर्वोत्कृष्ट कृति नारी
लोकप्रिय गायक कुमार वस्नेतका कुरा एकातिर तथ्य आर्कैतिर...
सत्य- स्वरुप दाजुभाइको कुरा कति सहि कति गलत ! तथ्य आफै...
भर्खरै पोस्ट गरिएको
रेस्लर भगवती युनिकालाई हेम माया पुरस्कार
बुनुको ‘तिमी मेरो हुन सकेनौ’ सार्वजानिक
रेस्लर युनिकाको गीतमा टिकटक प्रतिस्पर्धा
अरुणा लामाको सम्झनामा म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
मञ्जु थापाको ‘माया मुरी मुरी’सार्वजनिक
ग्लामर प्लस प्रडक्शन एण्ड मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित
सूचना बिभाग दर्ता नम्बर: २०५०/०७७-७८
Glamour Plus Production & Media House
Copyright © 2018 - 2020. All Right Reserved.
Web Design: GlamourNepal.Com